Bari: Tahriibayaal geeriyooday iyo kuwo kale oo la badbaadiyay – Radio Daljir
Febraayo 11, 2012 12:00 b 0
Bosaso,Feb 11 -Ciidamada badda ee dowladda Puntland ayaa soo badbaadiyay nolosha 13 tahriibyaal Soomaali ah oo isugu jiray haween iyo carruur,kadib markii dooni ay lasocdeen oo ku siijeeday dalka Yemen ay cilad farsamo kusoo wajahday xilli ay maraysay meel ku dhow xeebta degmada Ceelaayo ee gobolka Bari.
Dadaalka dadkan lagu soo badbaadiyay ayaa waxaa ay ka dambaysay kadib markii ay ciidamadu ogaadeen inay doonida ku dagaysay xeebaha degmada Ceelaayo ee gobolka Bari,dadkii doonta lasocday qaarkood ayaa la sheegay kooxaha wax tahriibinayay inay badda ku daadiyeen.
Taliayaha ciidamada badda Puntland Cabidirisaaq Diiriye Faarax oo la hadlay Radio Daljir ayaa waxaa uu sheegay inay gurmad caafimaad iyo cunto inay u sameeyeen dadka tahriibyaasha ahaa ee lasoo badbaadiyay,waxaana uu intaasi raaciyay taliyuuhu inay geeyeen isbitaalka Boosaaso si xaaladooda caafimaad loola tacaalloe.
Cabdi Faarax oo isagu ah xiriiriyaha hay’adda xuquuqda aadanaha ee INXA ayaa xaqiijiyay inay 58-qof oo ka mid ahaa rakaabkii doonida lasocday inay geeriyoodeen kadib marki si xoog ah loogu amray inay badda ku daataan.
Xeebaha u dhaxeeya Puntland iyo Yemen ayaa marar badan waxaa ka dhacay shilal sidaan oo kalle ay ugu le’deen dad naftooda khatar ku geliyay biyaha u dhaxeeya labada dhinac.
Fanaanadda iyo aktarada Maraykanka ah ee Whitney Houston oo geeriyootay iyadoo 48 jir ah